एक सयभन्दा वढी कोरोना संक्रमित आमाले जन्माए स्वस्थ्य शिशु
भारतको मुम्बई लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जनरल अस्पतालमा १ सयभन्दा वढी कोरोना संक्रमित महिलाले स्वस्थ्य बच्चा जन्माएका छन् ।
अस्पतालका डाक्टरका अनुसार संक्रमित महिलाबाट जन्मिएका १ सय १५ शिशुहरू मध्ये शुरुमा तीन जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो । ती शिशुहरूका पछिल्ला रिपोट नेगेटिभ आएका छन् ।
उनीहरु ६५ जना बालक र ७९ बालिका रहेको अस्पतालले उल्लेख गरेको छ । दुई संक्रमित गर्भवतीको मृत्यु भएको पनि अस्पतालले जनाएको छ । मुम्बईमा अहिलेसम्म २४ हजार कोरोना संक्रमित देखापरेका छन भने ८४० जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।
लोकमान्य अस्पतालले डेलीभरी केश धेरै भएपछि २२ ओटा अन्य अस्पताल रेफर गरेको थियो । अस्पतालले ती महिलाका लागि ४० ओटा छुट्टै विशेष वेडको व्यवस्था गरेको थियो भने संक्रमित डेलीभरीका लागि ६५ जना डाक्टर र दर्जनबढी नर्स सहभागी थिए । अस्पतालले गर्भवती थपिने भन्दै थप ३४ वेडको व्यवस्था गरेको छ ।
लोकमन्य अस्पतालका प्रसुती विभाग प्रमुख डा.अरुण नायकले भने,‘केहीमा कोरोनोको लक्षण नै थिएन भने कतिपयलाई श्वासप्रश्वास सम्वन्धी समस्या थियो ।’ ‘आमाहरू निकै चिन्तित थिए,उनीहरू सोध्थे बच्चा बाच्दैन होला ? तर हाम्रो कोषिस हुन्थ्यो बच्चा स्वस्थ्य होस’डाक्टर नायकले भने ।
बच्चा जन्मिएपछि सबै आमालाई विशेष वार्डमा राखियो । उनीहरूलाई हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन खुवाएर राखिएको थियो । सुत्केरीहरूलाई अस्पतालमै १० दिन अलग्गै क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । नवजात शिशुलाई आमासँगै राखिएको थियो । आमाहरू माक्स लगाएर स्तनपान गराउँथे ।
फरवरीमा चीनको बुहानमा एउटा संक्रमित महिलाबाट जन्मिएको शिशुमा ३० घण्टापछि संक्रमण पाइएको थियो । यो घटनालाई पनि अस्पतालका डाक्टरले फलो गरेका थिए । डिसेम्बरमा वुहानमा कोरोना संक्रमण देखियो । त्यसपछि मार्चमा शिकागोमा कारोना संक्रमित एउटा नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो । एक वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चाको मृत्यु भएको यो अमेरिकामा पहिलो थियो । यही महिनाको शुरुमा वेल्समा एउटा तीन दिनको नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो । उनकी आमामा कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
न्यूयोर्क युनिर्भसिटी स्कूल अफ मेडिसिनका शिशु संक्रमण विभागका निर्देशक एडम रैटनरको भनाइ छ,नवजात शिशुमा आमाबाट श्वासप्रश्वास सम्बन्धी रोग सर्ने सम्भावन कम हुन्छ । उनी भन्छन,‘पछिल्ला दिनमा धेरै नयाँ केश देखिएका छन् त्यसैले सतर्कता त हुनै पर्छ ।’ रिपार्टमा यो पनि देखिएको छ कि कोरोना संक्रमणकै कारण भ्रुणको मृत्यु समेत भएको छ ।
मुम्बईको लोकमान्य तिलक अस्पतालमा संक्रमित आमाबाट जन्मिने शिशुका संख्या अन्य शिशुको संख्या भन्दा २० प्रतिशतले वढी रहेको छ । डा. नायक भन्छन्‘ पछिल्ला हप्तामा यस्तो समय आयो हामीले नै असाहय अनुभूति गर्नु पर्यो,२८ वर्षिय युवती एउटा स्वस्थ्य बच्चा जन्माए आफू वितिन्,उनको फोक्सो फेलियर भएको थियो,उनी जिन्दगीको भीख माग्दै लगातार भन्दै थिइन–केही गर्न सकिन्छ कि ?
प्रकाशित १0 जेठ २0७७ , शनिबार | 2020-05-23 04:01:31